क्याथोलिक चर्च विज्ञान विरुद्ध छ? – 2माछा
घर / चर्च / मुद्दाहरु / क्याथोलिक चर्च विज्ञान विरुद्ध छ?
कुनै, को पाठ्यक्रम छैन.
आज साधारण misconception धर्म र विज्ञान स्वाभाविक आपसमा विरोध गर्दै छ.
यो विचार को मा ज्ञानोदय अवधिको विरोधी विश्वास पूर्वाग्रह देखि स्रोत 17th र 18th शताब्दीयौंदेखि, धेरै विश्वास गर्न आउँदा मानिस एक्लै वैज्ञानिक विधि मार्फत सत्य पत्ता लगाउन सक्छ. मानिसहरू आफ्नो आँखा प्राकृतिक संसारमा देख्न सक्थे मात्र के भरोसा गर्न आए; र अलौकिक अस्तित्व अस्वीकार गर्न, किनभने यो प्रयोगशाला छैन सिद्ध गर्न सकिएन. वास्तविकता मा, हुनत, विश्वास र विज्ञान दुवै को पछि लाग्नुलाई समावेश किनभने सत्य-र किनभने तार्किक त्यहाँ एउटा मात्र सत्य-विश्वास र विज्ञान आवश्यक भेट्न किस्मत छन् हुन सक्छ, र ठीक जब लागू, दुवै कारण निर्भर.
सुदूर विज्ञान को शत्रु हुनुको देखि त्यो कहिलेकाहीं चित्रण गरिएको छ, क्याथोलिक चर्च यसको truest patroness भएको छ. किनभने खगोल विज्ञान मा उनको कामबारे, उदाहरण को रुपमा, 35 चन्द्र मा क्र्याटर क्याथोलिक पूजाहारीहरू को सम्मान मा नाम गरिएको छ (थोमस ई. जंगल, क्याथोलिक चर्च पश्चिमी सभ्यता कसरी निर्माण, Regnery, 2005, पृ. 4). धेरै वैज्ञानिक अग्रगामी, वास्तबमा, यस्तो ग्रेगर Mendel रूपमा, लुइस Pasteur, र पिता जर्ज-हेनरी Lemaître, बिग बैंग सिद्धान्त पिता, थिए क्याथोलिक.
पोलिस astronomer निकोलस Copernicus थियो, पनि. मा 1543 उहाँले प्रकाशित आकाशीय क्षेत्र को Revolutions मा, जसमा उहाँले heliocentrism को सिद्धान्त प्रस्तुत: कि सूर्य र पृथ्वीको (रूपमा पहिले लाग्यो) को सौर्य प्रणाली को केन्द्र थियो.
यो राम्रो Copernicus 'अनुसन्धान पूरै चर्च द्वारा समर्थित थियो जान्नको लागि पछि ग्यालिलियोले सम्बन्ध परिचित ती चकित सक्छ, उहाँले समर्पित कि हदसम्म को Revolutions मा पोप पावल III गर्न. यसबाहेक, ग्यालिलियोले सुरुमा मण्डली अनुमोदन साथै आनन्द. Copernicus विपरीत, हुनत, उहाँले दुई महत्वपूर्ण त्रुटिहरू प्रतिबद्ध: विज्ञान को एक त्रुटि, धर्मको अन्य.
आफ्नो वैज्ञानिक त्रुटि सत्य रूपमा heliocentrism आफ्नो लापरवाह पदोन्नति संलग्न, छैन सिद्धान्त, तथ्यलाई बाबजुद समय मा यसको लागि empirical प्रमाण अभाव थियो. आफ्नो धार्मिक त्रुटि आफ्नो निष्कर्ष Sacred धर्मशास्त्रको सत्य फितलो बनाइदिएको छ कि आफ्नो दाबी थियो. यो सामान्यतः कल्पित छ तापनि मण्डली डर विज्ञान शायद ट्रम्प धर्म लागि ग्यालिलियोले हकार्नुभयो, वास्तविकता मा उहाँलाई उनको भनाई निष्ठालाई खडा हुनुभयो दुवै.
मध्य युग तिनीहरूले सिक्ने मा एक dearth प्रतिनिधित्व धारणा देखि "गाढा" भनिन्छ गरिएको छ. वास्तबमा, हुनत, विश्वविद्यालय सिस्टम मध्य युग समयमा सिर्जना गरिएको थियो, monastic केन्द्र सिक्नु-देखि चर्च लागि, छ. सोचाइ क्याथोलिक तरिकामा, विश्वास र कारण सँगै जाने. यो चर्च गरेको विश्वास छ कि मानिस देखि बग्छ, हुनुको शरीर र आत्मा दुवै, तर्क र विश्वास गर्न परमेश्वरले दिनुभएको क्षमता छ, थाहा र प्रेम. यसैले, जबकि चर्च प्रकट धार्मिक सत्य एउटा निश्चित प्राथमिकता दिन्छ, त्यो पनि सत्य मानव बुद्घि प्रयोग गरेर पत्ता हुन सक्छ कि राख्छ. एक थाहा सक्ने एउटा ईश्वरीय डिजाइनर, तपाईं यदि, पृथ्वीको वातावरण को जटिल सटीक नियालेर अवस्थित, प्रजाति को अचम्मको विविधता, वा सूर्यास्त को सौन्दर्य.
रचना हाम्रो विश्वास, यसबाहेक, विकास को विभिन्न सिद्धान्त केही तत्व स्वीकार हामीलाई निषेध गर्दैन, हामी विश्वास स्थापित सत्य अस्वीकार छैन ताकि लामो: अर्थात्, एक सृष्टिकर्ताको अस्तित्व, जसले हामीलाई विशिष्ट उहाँको छवि र स्वरूपमा बनेको, र केही brute पशु बाट.
विकास, को पाठ्यक्रम, कि सीमित छ, सबै भन्दा राम्रो मा, यो केवल के भयो जीवन पहिले नै आएका थिए पछि भन्न सक्छौं, तर यो कसरी आयो भन्न सक्दैन. प्राकृतिक संसारको प्रमाण विचार, पनि प्रमुख नमान्ने जीवशास्त्रीहरूको, यस्तो रिचर्ड Dawkins रूपमा, एक उच्च बुद्धि को likelihood स्वीकार गर्न छन्. यो समाचार कल गर्न अनिच्छुक “परमेश्वरको,” तर, Dawkins र अरूलाई परदेशी द्वारा seeded थियो पार्थिव जीवन सुझाव रूपमा हालसम्म गएका छन्, एक पेट्री पकवान एक प्रयोग गर्न अनिवार्य हाम्रो अस्तित्व कम. (कसले सिर्जना “परदेशी,” तिनीहरूले भन्छन्।)
चर्च, अर्कोतर्फ, रूपमा साथै सम्पूर्ण मानव व्यक्ति-शरीर देख्नुहुन्छ आत्मा-र दुवै को मर्यादा घोषणा.